ကတ်ပူစီနိုနှင့်ထုပ်ပိုးမှု၏လိမ်လည်မှု | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 12, 2009 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအလုပ်သို့သွားသောလမ်းတွင် McSkillet burrito ကိုကျွန်တော်ရပ်လိုက်သည်။ သူတို့ကိုငါဘယ်လောက်ချစ်တယ်၊ မနက်စာ Burritos ကိုငါဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာပဲ post တစ်ခုရေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါမှာနေစဉ် McDonaldsကျွန်တော့်သိချင်စိတ်ကကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ကျွန်တော့်ကိုရပ်မယ့်အစား McCafe Mocha မှာလိုက်တယ် အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်.
အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီးခေတ်မီဆန်းပြားသောသင်္ကေတများနှင့်မြေကြီးတပြင်လုံးကိုထုပ်ပိုးခြင်းသည်သင့်ကိုဝန်းရံ ထား၍ ဥရောပကဖေးသို့တက်နေသည်ဟုခံစားရစေသည်။ သင်မဟုတ်ပါ။ ကောင်တာနောက်ကွယ်မှလူသည်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ၊ အကြောင်းအရာများကိုနှိုးဆွပေးကာသောက်စရာကိုချိစ်များနှင့်ချောကလက်မိုးရေများဖြင့်ဖုံးအုပ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်တော်သတိထားလိုက်သည်။
ငါကားရတယ်, ပထမ ဦး ဆုံးငုံယူ။ , ... blech ။ ငါဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမသေချာဘူး၊ စက်နဲ့တစ်ခုခုတစ်ခုခုချွတ်ယွင်းနေတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကရိုက်နှက်ထားတဲ့မုန့်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ expresso ရိုက်ချက်တွေလိုအရသာရှိတယ်။ ငါကော်ဖီတစ်ခွက်နီးပါးအစွမ်းကုန်ရနိုင်သည် (ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ငါရေတပ်ထဲရောက်နေပြီ)၊ ဒါပေမယ့်ငါကလွှင့်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့အဖွဲ့ကပြifနာရှိလားမသိဘူး။ သူတို့ကကောင်းသောအမဲသားတွေသိလိမ့်မယ်။ 😉
ကျွန်တော်တစ်ဦးရှိ Starbucks က ကျွန်တော့်အလုပ်ကအောက်ထပ်ကကော်ဖီမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားဖို့ခက်တယ်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ peppermint ရည်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ Coca-Cola မှာ coca-cola ရှိတယ်ဆိုတာဘိုးဘေးတွေသိသွားသလိုပဲ Starbucks Peppermint မှာတရားမ ၀ င်တဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုတာငါတို့တစ်ချိန်ချိန်မှာသိမှာပါ။
Starbucks သည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားဤသို့ပြောလေ့ရှိသည်။ငါ့မှာပိုက်ဆံအများကြီးရှိတယ်၊ ငါမီးရှို့ထားတဲ့ပဲတချို့ကိုဒေါ်လာ ၄ လောက်သုံးနိုင်တယ်။"(ငါ့အဆွေခင်ပွန်းအချို့ကခေါ်ပါ မင်္ဂလာပါ) ။ အို Starbucks ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင်္ကေတသည်မှေးမှိန်လာသည်။ ငါရှည်လျားသောလိုင်းများထိမှန်ခဲကော်ဖီရပ်တည်ချက်နှင့်အတူဓာတ်ဆီဆိုင်ကဲ့သို့ Starbucks ကတက်အလွယ်တကူရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ခွက်သော်လည်း, ကြော့နှင့်သိသာစွာကွဲပြားနေဆဲဖြစ်သည်။
လက်ဝဲဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကော်ဖီပဲ။ သူငယ်ချင်းကောင်းဂျေဆန်နှင့်ခရစ်တို့သည်ကော်ဖီဆိုင်ကြီးကိုဖွင့်ကြသည်။ အဆိုပါ Bean ကိုဖလား ငါ့အိမ်ကနေထောင့်ပတ်လည်မှာ။
ကော်ဖီကိုအွန်တာရီယိုပြည်နယ်၊ ဟဲမီတန်မှကော်ဖီဖျော်စက်မှတင်သွင်းသည်။ ငရုတ်သီးမှုန့်တိုင်းကိုကဖိန်းဓာတ်ပါလျှင်၎င်းသည်အလွန်ချောမွေ့။ ကြွယ်ဝသော၊ စနစ်တကျလှော်ခြင်း၊ မြေခြင်း၊ tamped နှင့် steamed bean တို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရည်နှင့်ချိုသောအမြှေးပါးမျက်နှာပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟူသောခြားနားချက်ကိုရှင်းပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ မှာ Baristas Indianapolis ၏အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင် ၎င်း၏အရသာကိုအမြင့်ဆုံးသေချာစေရန်ရိုက်ချက်တိုင်းကိုဂရုတစိုက်တိုင်းပါ။ မကြာခဏဆိုသလိုပဲသူတို့ကိုငါမှန်မှန်ရိုက်သည့်အချိန်အထိပဲစွန့်ပစ်လိုက်သည်ကိုပြန်မြင်ရသည် - တစ်ခါတစ်ရံစိုထိုင်းဆသည်ဆိုးရွားသောကစားနည်းဖြစ်သည်။
သူတို့က Starbucks ကအကုန်အကျမများပါဘူး။ ပြီးတော့သူတို့တွေအများကြီးပိုကောင်းတယ် (McCoffee ထက်အဆပိုကောင်းတယ်)၊ ဒါပေမယ့်ခွက်ကအဖြူရောင်ပါ။ ဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါငါဝယ်ဖို့လာတာမဟုတ်လား။ ငါ do ဆိုင်ကပေးရသောအတွေ့အကြုံအတွက်လည်းပေးဆပ်ပါ။ အခန်းများစွာ၊ အခမဲ့ကြိုးမဲ့နှင့်အဆင်ပြေသောထိုင်ခုံများရှိသည်။
အိုးထုပ်ပိုး၏မုသာစကားကို! McDonalds သည်ဖလားအပြင်ဘက်မှကြည့်လိုက်သောခွက်တွင်ရှိသောအရာကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားရန်ငွေဘယ်လောက်သုံးခဲ့သည်ကိုငါစိတ်ကူး။ မရပါ။
Tags: Jason ကျသွားတယ်မျိုးစုံဒိုမိန်း spfမျိုးစုံ spf စံချိန်ppc အေဂျင်စီretargetingရှာဖွေရေးspf မှတ်တမ်းspf စံချိန်ရှာဖွေရေးတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ
ဘလော့ဂါ Black Hat SEO အတွက်နေရာ
12:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 40
ငါလည်းကော်ဖီမသောက်ရပေမယ့် Motrin Mom လိုခံစားရတယ် Starbucks မှာကျွန်တော်ထွက်ဆည်းပူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နွေးနွေးပြီးဆောင်းရာသီမှာအဆင်ပြေစွာထိုင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကနေအနားယူလို့ရတယ်။ လိုင်းတွေကစို့လာတယ်၊ ကော်ဖီကသိပ်မကောင်းဘူး၊ ကလေးတွေကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပြေးလွှားနေကြတာနဲ့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတယ်။
ကောင်းမွန်သောလွတ်လပ်သောကော်ဖီဆိုင်များသည်ဤအပိုင်းများ၌အလွန်ရှားပါးသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာနည်းနည်းလေးရှိတယ်၊ အသက်မရှင်ရသေးသောခွက်ကိုအသက်ရှင်ပါစေ။
12:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 47
မင်းထွက်ကြည့်ပြီးပြီ Indie ကော်ဖီဆိုင်များ? သင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိသည်တကား!
ဇန်နဝါရီ 13, 2009 မှာ 8: 51 AM
FYI: Broad Ripple ရှိ Starbucks ကော်ဖီ (venti) ကော်ဖီသည်ဒေါ်လာ ၂.၀၀ အထက်ရှိသည်။ Bean Cup ၏အွန်လိုင်း menu ကဒေါ်လာ ၁.၅၅ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၄ ခွက်၏ပုံပြင်များသည် NYC ကဲ့သို့သောစျေးကွက်များမှလာခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်အလွန်ကြီးစွာသော post ကို Doug!
ဇန်နဝါရီ 13, 2009 မှာ 11: 03 AM
ငါလည်း McBlech ကော်ဖီကိုသောက်ကြည့်တယ်။ သင်ချွတ်ယွင်းမှုကိုမတွေ့ပါ။ ငါသူတို့ကိုငါအခွင့်အလမ်းသုံးခုပေးသောကွောငျ့ငါသိ၏ တစ်ခုမှာအအေး caramel အနံ့ latte ။ တစ်ခုမှာပူ latte ။ တစ်ခုမှာပူ Mocha ။ သူတို့ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာကော်ဖီအရမ်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ငါပြန်ပေးပြီးထပ်စမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
ကော်ဖီဆိုင်ကိုကော်ဖီသောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပြောင်းလာရင်ငါအရမ်းအံ့သြသွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက် - ကျွန်ုပ်သည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အသွေးရှိသော်လည်း၊ အဆိုပါအရာဖြစ်ကောင်းတစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်သူ့ဟာသူပေးဆောင်။ အခုငါသူတို့ကိုငါကုန်ကျစရိတ်၏အနည်းငယ်အဘို့အလိုချင်အတိအကျဘယ်လိုငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပါ။ သူတို့က ၀ တ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့ဝက်အကြောင်းသူတို့ပြောတာကိုမင်းတို့သိတယ်။
Yael K. Miller က
13:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 04
နံနက်ခင်း၌ @ swoodruff's Five ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ငါကကော်ဖီသောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါကလက်ဖက်ရည်သောက်သူတစ်ယောက်ပါ၊ သူတို့နာမည်မှာ“ လက်ဖက်ရည်” ရှိပေမဲ့လက်ဖက်ရည်သောက်တာနေရာတွေရှိတယ်။
လူတယောက် X ကကော်ဖီအရမ်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ သူတို့က Y ကိုကော်ဖီခွက်ကိုင်ပြီးသွားကြတယ်။ Person X ကဘယ်မှာလဲ Y ကိုကော်ဖီသောက်တာလဲမေးတယ်။ Person X ညွှန်ကြားချက်ပေးတာမကောင်းဘူး၊ Person Y လမ်းညွှန်ကိုမသိဘူး၊ Person Y ကအင်္ဂလိပ်လိုသိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါကြောင့် Person Y ကော်ဖီဆိုင်ရှာဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ တကယ်လို့ကော်ဖီအလွတ်မှာတကယ်တမ်းလိုချင်တဲ့လူတစ် ဦး လိုဂိုရှိရင်ဘာကိုရှာရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်။
ဥပမာကိုဝိုင်အဖြစ်ပြောင်းကြရအောင်။ ငါအချို့ဝိုင်များ၏အမည်များကိုမှတ်မိပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်။ ငါစပျစ်ရည်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားသောအခါ, ငါအကျွမ်းတဝင်တံဆိပ်များများအတွက်အလားအလာအပေါ်ဖြစ်၏။
13:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 30
The Bean Cup သူငယ်ချင်းဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ခွက်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်သူတို့လိုဂိုမရှိဘူးဆိုတာသေချာပါတယ်။ သူတို့ကပိုက်ဆံအများကြီးကိုပဲကြီးတွေမှာသုံးတာပေါ့၊
ဇန်နဝါရီ 14, 2009 မှာ 12: 00 AM
မင်းပြောတဲ့ဒီ Bean Cup ဘယ်မှာလဲ။ 😉
14:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 11, 44
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ post ကို။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကော်ဖီဆိုင်၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းက၎င်းကို ပို၍ ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေသည်။ ငါသဘောတူတယ်၊ ငါအမှတ်တံဆိပ်ဟာ Bean ဖလားကိုကူညီလိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာလုပ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်မတန်နိုင်ဘူးလို့လည်းငါထင်တယ်။ အပေါ်ကဥပမာမှာ Person Y ကိုကော်ဖီသောက်ချင်တဲ့နေရာကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူမြန်မြန်ပြောပြနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ငါပြောတာတစ်ခုကအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာငါသိတယ်။